Shanta Talooyin ee ugu sareeya Hay'adaha raadinaya inay dhisaan durdurro dakhli oo cusub oo dhibaato ku sugan | Martech Zone
Iyadoo kooxaha suuqgeynta ay qasab ku tahay inay joojiyaan oo ay dib u qeexaan istiraatiijiyadooda 2020, waa cadaalad in la yiraahdo waxaa jiray heshiis fowdo iyo jahwareer wanaagsan oo ka dhex jiray warshadaha.
Caqabada asaasiga ahi wali waa sidii hore. Sideed ula xiriiri kartaa dadka si aad u ilaaliso daacadnimada oo aad u hesho macaamiil cusub? Waxa gebi ahaanba isbadalay, si kastaba ha noqotee, waa siyaabaha iyo macnayaasha lagu gaarayo.
Tani waxay fursad u abuureysaa shirkadaha u nugul inay ka faa'iideystaan. Waa kuwan shan talooyin oo loogu talagalay kuwa raadinaya inay udub dhexaad u noqdaan cudurka faafa ee coronavirus.
Tip 1: Deji Maskaxda Shaqaalaha
Dhamaantiis waa wax fiican oo hami weyn ku leh hami sare ee ururka, laakiin kuwan waa in lagu quudiyaa inta lagu jiro shaqaalaha si loogu dhiiri geliyo dhammaan shaqaalaha inay la wadaagaan himilada cusub ee shirkadda. Waxay ahayd waqti nabar shaqaalaha, sidaa darteed hubinta inay fahmaan sababta ay shirkaddu ula qabsaneyso hawlaheeda ayaa muhiim ah. Tani waxay awood u siin doontaa shaqaalaha inay ogaadaan fursadaha ka jira saldhigga macaamiisha oo dhan, iyadoo u abuureysa hay'adda dakhli cusub.
Talada 2aad: Xallinta Dhibaatooyinka Hal Abuurka ah
Tani waa wax ay shaqaalaha hay'adda oo dhami ku boodi doonaan. Ololeyaal hal abuur leh oo wanaagsan dhammaantood waxay ku saabsan yihiin xallinta dhibaatooyinka - ganacsataduna marar dhif ah ayey la kulmeen caqabado ka waaweyn kuwa ay hadda ku jiraan. Awoodda in wax loo arko si ka duwan qaabab iyo soo bandhigid fikrado cusub ayaa ah mid ka mid ah hawlgallada ugu waaweyn ee hay'adaha hal-abuurka leh, weligoodna taas ma ahan mid ka muhiimsan.
Talo 3: Dib-u-isticmaalka Mawduuca
Miisaaniyaduhu, xaalado badan, waxay u badan tahay in la kala bixinayo ugu yaraan inta ka hartay sannad-maaliyadeedka. Xaaladaha qaarkood, maalgashi aad u tiro badan sida shirar iyo bandhigyo ayaa laga yaabaa in lagu khasaaray, kuwa kalena, waa in si dhakhso leh dib loogu qaybiyo si loo ilaaliyo xawaaraha. U guuritaanka tan jawiga dhijitaalka ah waxay la timid faa iidooyinkeeda, kuwaas oo ah dib-u-isticmaalka waxyaabaha. Marti gelinta kal-fadhiyada dijitaalka ah sida dhacdooyinka onlaynka ah ama websaydhyada ayaa bixin doona qulquli ka kooban waxyaabo loo isticmaali karo waqti iyo mar kale. Adoo ku quudinaya waxyaabaha ku jira marinnada kala duwan, tani waxay kobcin doontaa ololeyaal dhab ah oo fara badan.
Talada 4aad: Samee Mundane, Xiiso badan
Dhacdooyinka dhijitaalka ahi waa tusaale weyn oo xeelad ah, markii lagu degdego, ay dhaawici karto sumcadda sumadda. Qiyaasta waxay noqon kartaa in ikhtiyaarka kaliya uu yahay in la abaabulo webinar qallafsan, oo ka baxsan sanduuqa, tusaale ahaan, si looga hor tago macaamiisha. Natiijo ahaan, nooc kasta oo shakhsi ahaaneed ama hal-abuur ayaa loo huray. In kasta oo xiriirka fool-ka-fool ah uu xadidan yahay, taasi macnaheedu maahan in khibrad shaqsiyeed aan la bixin karin. Kordhinta maskaxda hal abuurka ah waxay u muujin doontaa macaamiisha inaad awood u leedahay inaad xalliso arrimaha waaweyn, taas oo adkeyn doonta xiriirka iyo xaqiijinta cimri dherer.
Talada 5: Ka Hortag Macaamiisha
Ma jiri doonto shirkad aan haba yaraatee saameyn ku yeelan cudurka faafa ee coronavirus. Lahadalka macaamiisha iyo fahamka sida Covid-19 uu u saameeyay istiraatiijiyadooda suuq geynta shaki la'aan wuxuu furi doonaa fursado fara badan oo lagu dejiyo fursado dheeri ah oo aysan waligood tixgelin karin.
Waxaan aragnay gacanta koowaad rabitaanka macaamiisha inay qaataan qaabab cusub oo feker si loo xaliyo dhibaatooyinka ay hada wajahayaan. Adoo adeegsanaya agile, habka hal abuurka ah ee maamulka hay'adda, waxaa jira fursad ku filan oo lagu adkeeyo xiriirka macaamiisha laguna guuleysto ganacsi cusub.
Tags: hay'addacontentdhibaatadawakaaladda qaabeyntaxiridarinkii
Sida loo is waafajiyo 2 Kalandar Google